धार्मिकस्थल मात्र नभई प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्णछ पाथीभरा | tour Khabar
धार्मिकस्थल मात्र नभई प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्णछ पाथीभरा
काठमाडौंः एक नम्बर प्रदेशको ताप्लेजुङमा अवस्थित पाथीभरा एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो । हिन्दू एवं बौद्ध लगायत सम्पुर्ण धर्मालम्बीहरूको महत्वपूर्ण धार्मिकस्थल मानिने यहाँ बार्षिक लाखौ तीर्थालुको भिड लाग्ने गर्दछ ।
ताप्लेजुङको १२ हजार फिट उचाइमा रहेको पाथीभरा मन्दिर फुङलिङबाट १९.४ किलोमिटर पूर्वोत्तरतर्फ तीन हजार सात सय ९४ मीटरमा पर्दछ । फुङ्लिङबाट एक दिन पैदल हिँडेर पुगिने यो मन्दिरमा अन्न भरेको पाथीझैं सुन्दर, मनमोहक आकृति बोकेको पाथीभरा पहाडको शिखरमा देवीको उत्पतिस्थल रहेकोले यी देवीको नाम ‘पाथीभरा देवी’ भनिएको पाइन्छ । लिम्बू समुदायहरू पाथीभरालाई ‘मुक्तुवुङ’ भनेर चिन्दछन । लिम्बूभाषामा ‘मुक्तु’को अर्थ शक्ति वा बल, ‘वुङ’को अर्थ बोट भन्ने जनाउँदछ । अर्थात लिम्बूजातिहरू पाथीभरालाई शक्ति वा बलको श्रोत वा बाटोको रूपमा प्रकट गर्ने गर्दछन ।
पाथीभरा देवीको प्रतिमा
माथि नै उल्लेख गरिएको छ कि पाथीभरा देवी विश्वास आस्था एवं पवित्रताकी देवी हुन । त्यसैले पाथीभरा धाममा त्यसरी नै जानुपर्ने हुन्छ। धाममा जानलाई कुनै जात, धर्म वा लिङ्गको भेदभाव छैन र बन्देज छैन । ‘मनमा शुद्धता, देवीप्रतिको भक्तिभाव राखे पुग्ने तर पाथीभरा धाममा गर्भवति, रजस्वला (नछुने वा पर सरेकी) भएकी महिला, बरखी बारेको, मनमा लोभ, पाप बोकेको मान्छे गएको खण्डमा उनीहरूको सर्वनाश हुन्छ, ठूलो क्षति हुन्छ’ भन्ने जनधारणा रहिआएको छ ।
पाथीभरा देवीको निम्ति पशु बलि अनिवार्य नभए पनि बलि चढाउनु अति उत्तम मानिन्छ । काटमार नगर्नेहरू देवीलाई स्वादिष्ट फलफूल तथा मिठाईको भोग चढाउँछन । पाथीभरा देवीलाई अटल शौभाग्यकी प्रतिकको रूपमा मानिन्छ। त्यसैले सबै किसिमका श्रद्धालु भक्तजनहरूले देवीलाई सौन्दर्य प्रशाधनका सामाग्री जस्तै सिन्दुर, टीका, गाजल, काँगियो, आदि पनि (एक किसिमको अनिवार्य रूपमा) चढाउने गर्दछन ।
पाथीभरा देवी उत्पतिस्थल
फेदीबाट लेकाली अङगेरी, गोब्रेसल्लो, धुपी, गुराँसको जंगल मालिङोघारीको बाटो हुँदै लगभग २ घण्टा ठाडो उकालो हिंडेपछि मन्दिर पुगिन्छ । जति पुग्नलाई चुनौति खेप्नु पर्छ पुगे पनि उत्तिनै खुसीको अनुभूति पनि पाइन्छ । कुम्भकर्ण हिमाल र अन्य हिमश्रङखलाले अगाडीबाटै स्वागत गर्छ । कञ्चनजंघाको भिरालो फाँट, सौन्दर्य दृश्यले स्वर्गीय आनन्दको अनुभूतिले आफैंमा हराइन्छ । कञ्चनजंघामा सूर्योदय र सूर्यास्तको अत्यन्तै सुमधुर सुन्दर मोहनीलाग्दो दृश्य हेर्न पाउनु अर्को अवसर हो ।
पाथीभरा डाँडाबाट अवलोकन गर्न सकिने दृश्य
पाथीभरा दर्शनसँगै हाङकिङ ट्रेक मात्र नभएर एक दर्जन बढी हिमालको नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ । कञ्चनजंघा (८५८६ मि.), कुम्भकर्ण (७७१० मि.), काङबाचेन (७९०३ मि.), मकालु (८४६३ मि.), लोत्से (८५१६ मि.), नोत्से (७८५५ मि.) हिमाललाई नजिकबाट दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । हिमालमात्र नभएर तराईको भुभाग देखि एक नम्बर प्रदेशका अधिकांश स्थानलाई मज्जाले नियाल्न सकिन्छ ।
पाथीभरा देवीको मन्दिर ३७९४ मिटर उचाइमा भएकाले यहाँको तापक्रम शून्य डिग्री सम्ममा झर्ने गर्दछ । तीर्थयात्रीलाई उचाइ(हाइ) पचाउन नसक्दा विरामी हुने सम्भावना हुन सक्छ । यसरी चिसोबाट बच्न घरेलु उपचारको सामाग्री जस्तै तातोपानी, भुटेको मकै, अदुवा, लसुन, गरम खाद्य तथा पेय पदार्थ र न्यानो कपडाहरू प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ ।
पाथीभरा यसरी पुगिन्छ
पाथीभरा यात्राको लागि फाल्गुणदेखि कार्तिक महिनासम्मको अवधि उपयुक्त मानिन्छ । झापाको बिर्तामोड बाट इलाम– फिदिम– हुँदै २७० किमी फुङलिङ मेची राजमार्गमा यात्रा गरी फुङलिङबाट– सुकेटार– तल्लो फेदी– माथिल्लो फेदी हुँदै पाथीभरा पुग्न सकिन्छ । अन्य मार्गमा धरान बाट धनकुटा–हिले–बसन्तपुर–गुफापोखरी–गोर्गा दोभान ताप्लेजुङ हुदै पुग्न सकिन्छ । हवाइ मार्गबाट बिराटनगर— सुकेटार र काठमाडौबाट सुकेटार पुगेर पनि यात्रा तय गर्न सकिन्छ ।
‘बागदबार नभत्काउनू’ भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश गलत छः मेयर शाक्य
पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा सरकार : पर्यटनमन्त्री अधिकारी
पर्यटन प्रवर्धन गर्न स्याङ्जामा प्याराग्लाइडिङ वर्ल्डकप
गोही संरक्षणमा जाल बाधक